टेक्नोलोजी - सांप्रदायिक समाचार: अनलाइन व्यापार, थोक र B2B बजार समाचार
Ever since Instagram was launched, users are after इन्स्टाग्राम वृद्धि in terms of followers. No matter how long you have been focusing on that, there are always new ways to try. In this article, we are going to talk about the latest hacks that get you at least 1K followers for Instagram. Then stay tuned!
16 सक्छ, 2021 13 सक्छ, 2021 Skylly	टिप्पणी छोड्नुहोस्
यस समयमा एसएसडी निस्सन्देह विन्डोज र प्रोग्राम चलाउनको लागि एक आदर्श उपकरण हो किनकि यो परम्परागत एचडीडी भन्दा धेरै छिटो छ। तसर्थ, अधिक र अधिक व्यक्तिहरू जो आफ्नो एचडीडीलाई एसएसडीमा अपग्रेड गर्न वा विन्डोज र कम से कम एसएसडीमा प्रोग्रामहरू चलाउन गति योजना खोजिरहेका छन्। सबै पछि, SSD क्षमता मा सानो छ र मूल्य मा उच्च। उदाहरण को लागी, तिनीहरूले अमेजन मा एक २GB०GB आन्तरिक एसएसडी किन्न $ $ ० को लागत लिन सक्दछ र केवल विन्डोज र प्रोग्राम चलाउँछन् जुन यसमा गति चाहिन्छ।
सम्पादकको पिक 16 सक्छ, 2021 13 सक्छ, 2021 Aria Beucher	टिप्पणी छोड्नुहोस्
13 सक्छ, 2021 11 सक्छ, 2021 मारियान जोनसन	टिप्पणी छोड्नुहोस्
मार्केट क्यापमा २$..27.98 2.94 अर्ब डलर र दैनिक व्यापार मात्रा २.XNUMX billion अर्ब डलर रहेको कोइनमार्केटकेपका अनुसार नन-फन्गीबल टोकन (एनएफटी) अहिलेको मूल्यवान् उद्योगमा विस्फोट भएको छ। यसले कलाकार, सामग्री निर्माता, डिजाइनर, गेमर, चलचित्र निर्माता, र फोटोग्राफरहरूको लागि ठूलो मूल्य सिर्जना गरेको छ।
11 सक्छ, 20219सक्छ, 2021 हितेश चौहान	टिप्पणी छोड्नुहोस्
Android अनुप्रयोग विकास यी दिन एक महत्वपूर्ण पक्ष भएको छ। उचित अनुप्रयोग विकासको सहयोगमा, व्यापारीहरू लक्ष्य दर्शकहरूको फराकिलो दायरामा पुग्न र उनीहरूको व्यवसायको लागि उच्च रूपान्तरण दर आकर्षित गर्न सजिलो भएको छ। यसका अतिरिक्त, एन्ड्रोइड अनुप्रयोग विकास व्यापारीहरूको प्रयोगको साथ उनीहरूको लक्षित दर्शकहरूको अगाडि एक विश्वसनीय र भरोसायोग्य ब्रान्ड छवि पनि सिर्जना गर्न सक्दछ। तसर्थ हामी कुशलतासाथ निष्कर्षमा पुग्न सक्छौं कि जब एक व्यापारीले आफ्नो व्यवसायको लागि समर्पित एन्ड्रोइड अनुप्रयोग डेवलपरलाई भाडामा लिन्छ तिनीहरूले नयाँ सम्भावनाको लागि प्रवेश द्वार पनि खोल्दछन्।
8 सक्छ, 2021 8 सक्छ, 2021 एल्सा विवाह	टिप्पणी छोड्नुहोस्
सम्पादकको पिक3सक्छ, 2021 अप्रिल 29, 2021 नीरव परमार	टिप्पणी छोड्नुहोस्
डिजिटल अर्डरिंग, अनलाइन भुक्तानी, सोशल मिडिया, आदि। अब अधिक भव्य शब्द हो किनकि अधिक र अधिक उद्योगहरूले यी आधुनिक प्रविधिको शक्ति प्रयोग गर्छन् उनीहरूको व्यवसाय माथि उठाउन, र रेस्टुरेन्ट उद्योग यसबाट मुक्त छैन। पहिले, रेस्टुराँको व्यवसाय चलाउनु भनेको शेफलाई खाना पकाउने पक्ष थियो र अर्को तर्फ खाने मानिसहरू, तर अब प्रविधिले सबै कुरा परिवर्तन गरेको छ।
1 सक्छ, 20212सक्छ, 2021 Tracie Johnson	टिप्पणी छोड्नुहोस्
विश्वका अधिकांश कम्प्युटर प्रयोगकर्ताहरूले विन्डोज अपरेटिंग सिस्टम प्रयोग गर्छन्। सबैभन्दा भर्खरको अपडेट विन्डोज १० हो, जसले विन्डोज over लाई कब्जामा लिएको छ। अपग्रेडको साथ पनि, कुनै समय, तपाईंको कम्प्युटरमा जहिले पनि टेक्निकल मुद्दाहरू हुन्छन्। रिपोर्ट गरीएको छ, तपाइँ धेरै जसो टेक मुद्दाहरू कसरी समाधान गर्ने थाहा छैन।
जब तपाइँको कम्प्युटर सूचना बिना बन्द हुन्छ, वा यो सुस्त हुन्छ, तपाइँ त्यहाँ असहाय रहनुहुनेछ। हामी यहाँ छौं तपाइँलाई विन्डोज टेक्निकल मुद्दाहरूको कसरी समाधान गर्ने भन्ने बारे केही तरिकाहरू दिन। हामी सिधा यसमा प्रवेश गरौं।
1 सक्छ, 20212सक्छ, 2021 गुस्ताभो मार्क	टिप्पणी छोड्नुहोस्
सबैभन्दा नयाँ सामसु top शीर्ष स्मार्टफोन मोडेलहरूको आविष्कारहरू हटाउँदै। सामसुसँग कम मूल्यवान मोडेलहरू सहित स्मार्टफोन लाइनहरू छन्, तर ग्यालक्सी एस लाइन पक्कै यसको फ्रन्ट-रनर हो। हामी सजिलै अन्तिम मोडलबाट केवल एक बर्ष भित्र ठूलो परिवर्तनको आशा गर्न सक्दैनौं, तथापि, S21 संशोधन डिजाइन डिजाइनको पछाडि जान्छ।
क्यालिफोर्नियाको सेन्ट्रल उपत्यका अर्को सिलिकॉन उपत्यका बन्छ
अप्रिल 30, 2021 अप्रिल 27, 2021 जेफ रोमेरो	टिप्पणी छोड्नुहोस्
सामान्यतया यसको खेतीपाती र उत्पादनका लागि परिचित, क्यालिफोर्नियाको केन्द्रीय उपत्यका फराकिलो खुला ठाउँ हो जुन अब टेक्नोलोजी संसारलाई भेट्दैछ। मोडेस्टो, फ्रेस्नो र स्टकटन जस्ता सहरहरूले आईटी, कोडिंग, कम्प्युटर प्रोग्रामिंग र प्रक्रिया विश्लेषण जस्ता प्रविधि सम्बन्धी रोजगारीमा ठूलो बृद्धि भएको छ।
अप्रिल 24, 2021 अप्रिल 22, 2021 अनिल कुमार	टिप्पणी छोड्नुहोस्
क्रस-प्लेटफर्म अनुप्रयोग विकास के हो?
क्रस-प्लेटफार्म अनुप्रयोग विकास सफ्टवेयर सेवा वा सफ्टवेयर वातावरण वा असंख्य प्लेटफर्महरूको लागि उत्पादनहरू उत्पादन गर्ने विधि मानिन सकिन्छ। यो क्रस-प्लेटफर्म अनुप्रयोग विकास असंख्य बर्षको लागि लोकप्रिय रूपमा विकसित भएको छ र थप विकासकर्ताहरूको विभिन्न समुदायहरूको छानबिनको लागि प्रयासरत छ। प्रयोगकर्ताहरूलाई क्रस-प्लेटफर्म मोबाइल अनुप्रयोग विकास सेवाहरूतिर आकर्षित गर्ने मुख्य पक्ष यो हो कि यसले कम समयमा भविष्य दृष्टिकोण दिन सहयोग गर्दछ।
अप्रिल 21, 2021 अप्रिल 18, 2021 Tracie Johnson	टिप्पणी छोड्नुहोस्
सेल फोन एक्लै टेलिफोन छैन। यसको सट्टा, तिनीहरू व्यक्तिगत कम्प्युटरहरू हुन्। सेल फोनका लागि डिजाइन गरिएका अनुप्रयोगहरू आज बजार बाढी आउँछन्, तर तिनीहरू मध्ये केही सबै समय आवश्यक हुन्छन्। मानिसहरूले फोनलाई हल्का रूपमा लिदैनन्, धेरै उनीहरूको गहन, अन्तर्क्रियात्मक अनुभवहरूको कारण। यी कार्य र खेलका लागि उत्कृष्ट अनुप्रयोगहरू हुन् र केही बाहिर कामका लागि।
अप्रिल 19, 2021 अप्रिल 16, 2021 Skylly	टिप्पणी छोड्नुहोस्
हालसालै, म मेरो एनटीएफएस ड्राइभमा भण्डारण गरिएको डाटा पहुँच गर्न सक्दिन र चेतावनी प्राप्त भयो "भ्रष्ट मास्टर फाइल टेबल। विन्डोजले डिस्कबाट मास्टर फाइल तालिका पुन: प्राप्ति गर्न प्रयास गर्दछ। विन्डोजले मास्टर फाइल तालिका पुन: प्राप्त गर्न सक्दैन। CHKDSK रद्द गरियो। " यदि मैले मेरो ड्राइभ खोल्ने प्रयास गरें भने, मैले अर्को त्रुटि पाए: “म: पहुँचयोग्य छैन। फाईल वा निर्देशिका भ्रष्ट र अपठनीय छ। "(तल चित्र)
अप्रिल 17, 2021 अप्रिल 13, 2021 एल्सा विवाह	टिप्पणी छोड्नुहोस्
अप्रिल 14, 2021 अप्रिल 14, 2021 डेभिड ज्याक्सन, एमबीए	टिप्पणी छोड्नुहोस्
सम्पादकको पिक अप्रिल 14, 2021 अप्रिल 12, 2021 एलेक्स बेल्से	टिप्पणी छोड्नुहोस्
यो गाह्रो समय हो। उथलपुथल, परिवर्तन, र अभूतपूर्व परिस्थितिहरू संसारभरि नै देखिएका छन्। तपाईको क्षेत्र जे भए पनि तपाईको उद्योगले संचालन गर्ने तरीकाले तपाईले प्रमुख परिवर्तन देख्नु भयो। यो यातायात को दुनिया को लागी निश्चित छ।
यस लेखमा, हामी पाँच मुख्य परिवर्तनहरू अन्वेषण गर्छौं जुन यातायात उद्योगले अनुभव गरेका छन् - वा अनुभवको आशा गर्दछन् - भर्खरको र आउँदो वर्षहरूमा। महत्त्वपूर्ण कुरा, हामी यो पनि पत्ता लगाउँदछौं कि कसरी तिनीहरूले तपाईंको र तपाईंको व्यवसायलाई असर गर्न सक्दछन्, वा कमसेकम तपाईंले जुन तरिका बाट यात्रा र यात्रा गर्नुहुन्छ।
सम्पादकको पिक अप्रिल 12, 2021 अप्रिल 11, 2021 Dmytro Spilka	टिप्पणी छोड्नुहोस्
नयाँ टेक्नोलोजी र उपकरणहरूको विचार गर्दा कहिल्यै सुस्त क्षण कहिल्यै आएको छैन। एप्पल र सामसु like जस्ता धेरै ठूला टेक संगठनहरू हरेक वर्ष नयाँ ह्यान्डसेटहरू जारी गर्दछन् जसले अनौंठो सुविधाहरूका साथ प्रभावित गर्दछ र भीडको भीड, जसले उनीहरूलाई छलफलको विषय बनाउँदछ।
धेरै बर्षमा हामीले स्मार्टफोनको बजार बढेको देख्यौं। यद्यपि यसको वृद्धि बिस्तारै स्थिर भएको छ। महामारीको पनि यसले तुरून्त तुरुन्त प्रभाव पार्दछ, यद्यपि हामीले सायद हाम्रो प्रयोग गरिसकेका छौं यस समयमा सबैभन्दा धेरै स्मार्टफोनहरू.
सम्पादकको पिक अप्रिल 8, 2021 अप्रिल 7, 2021 Tracie Johnson	टिप्पणी छोड्नुहोस्
थ्रीडी स्क्यान कोठा वा भवन को अधिक सही मापन लिन प्रयोग गरीन्छ। थ्रीडी मा मापन एक पोइन्ट नक्शा मा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ जो तपाईं मापन आउट क्षेत्र स्पष्ट विवरण मा अन्वेषण दिन्छ। यो ईन्जिनियरहरू र आर्किटेक्टहरूको लागि उपयोगी छ जो मुद्रित योजनाहरू र कोठा लेआउटहरूको सट्टा सटीकता र दक्षता चाहान्छन्।
सम्पादकको पिक अप्रिल 8, 2021 अप्रिल 8, 2021 जोन ह्यारी	टिप्पणी छोड्नुहोस्
सामाजिक मिडियालाई नयाँ संसार मानिन्छ जहाँ प्रयोगकर्ताहरूसँग उनीहरूको डिजिटल पहिचान हुन्छ। एक सामाजिक मिडिया प्लेटफर्म जस्तै एक अनलाइन प्लेटफर्म मा एक व्यक्तिको परिचय डिजिटल परिचय भनेर चिनिन्छ। रिपोर्ट गरिएको रूपमा, सामाजिक मिडिया प्रयोगकर्ताहरूले गणना गरे 4.2 अर्ब २०२० मा। अनलाइन प्रयोगकर्ताहरूको ठूलो संख्या पूर्ण रूपमा जैविक छैन। यसले नक्कली, नक्कल, र सिंथेटिक पहिचान पनि समावेश गर्दछ। यो समस्याले शक्तिशाली सामाजिक मिडिया उपयोगकर्ता प्रमाणीकरणको लागि कल खडा गर्दछ, वित्तीय संस्था द्वारा प्रयोग गरिएको विधि जुन तपाईंको ग्राहकलाई चिन्छ।
सम्पादकको पिक अप्रिल 6, 2021 अप्रिल 5, 2021 राजकमल	टिप्पणी छोड्नुहोस्
प्रत्येक चोटि जब तपाईं एक बैंक लेनदेन गर्नुहुन्छ, तपाईं आफ्नो मोबाइल फोनमा एक OTP पाउनुहुनेछ र तपाईंले लेनदेन पूरा गर्न प्रविष्ट गर्नुपर्नेछ। एटीएमहरू र डेबिट कार्डहरूको मामलामा, तपाईंले आफ्नो पैसा प्रयोग गर्न सही पिन सम्झनु पर्छ र प्रविष्ट गर्नुपर्दछ। धेरै तरीकाले, हामी पनीहरू र ओटिपीहरू बैंकिंग लेनदेनका लागि प्रयोग गरेर ठूला भएका छौं, सबै असुविधा र निराशाको बावजुद।
अप्रिल 4, 2021 अप्रिल 2, 2021 एल्सा विवाह	टिप्पणी छोड्नुहोस्
HP ल्यापटप ब्याट्री किन प्लग इन भएको बेला चार्ज हुँदैछ? यदि तपाईंको एचपी ल्यापटपमा लिथियम-आयन (ली-आयन) ब्याट्री छ भने, त्यहाँ विद्युत् अर्धचालक छ जसले एक रासायनिक प्रतिक्रिया सिर्जना गर्दछ जब विद्युतीय चार्ज यस मार्फत चल्दछ। यस प्रतिक्रियाले ब्याट्रीलाई उच्च भोल्टेजको आयनहरू छोड्दछ। परिणाम यो छ कि तपाईको ल्यापटप पावर पुनःस्थापना हुन्छ जब विद्युत बन्द हुन्छ।
12... 35 पुराना पोष्टहरू।